Madaxweyne Donald Trump ayaa qirtay in wiilkiisa uu la kulmay Ruushka | allsaaxo online
Madaxweyne Donald Trump ayaa qirtay in wiilkiisa uu la kulmay Ruushka
Published on August 6, 2018 by said · No Comments
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa markii ugu horeysay qirey in wiilkiisa Trump Jr uu la kulmay garyaqaan Ruush ah si uu “xog uga helo qof lid ku ah”, balse waxa uu ku adkaysanayaa in kulankaas uu ahaa mid sharci ah.
Waa hadalkii ugu toosnaa ee arrimahan ku saabsan ee laga hayo Trump.
Baaraha gaarka ah Robert Mueller ayaa baaraya warbixin hay’adaha sirdoonka Maraykanka ay heleen oo ku saabsan faragalin Ruushka ay ku sameeyeen doorashadii Maraykanka 2016-kii, taas oo loogu xaglinayay Trump.
Madaxweynaha ayaase beeniyay in ay jireen waxyaabo laga wada shaqeeyay.
Dowladda Ruushka ayaa sidoo kale si is daba joog ah u beenisay in ay faragaliyeen doorashooyinka Maraykanka.
Maalintii axadda ayay warbaahinta kala duwan ee CNN, Washington Post iyo wakaalada wararka ee AP waxa ay baahiyeen in Trump uu ka walwalsanyahay in wiilkiisa laga yaabo in uu galay dhibaato xagga sharciga ah, kadib kulankii uu la yeeshay dad Ruushka ka socda. Warbaahinta ayaa soo xiganayay illo wareedyo kala duwan.
Balse Trump ayaa ku jawaabay “Warbaahinta been abuur ayay baahinayaan, waa wax aan sal iyo raad lahayn, in aan aniga ka walwalsanahay kulanka wiilkeyga qaaliga ah uu ku yeeshay dhismaha Trump Tower, kulanka wuxuu ahaa mid uu xog uga raadinayay qof mucaarad nagu ah, kulankana wuxuu ahaa mid sharciga waafaqsan”.sidaasi waxa sheegay madaxweyne Trump
Trump ayaa intaas ku daray in uusan kaba warhaynin kulanka.
Balse dhibka jira ayaa ah in hadalkan cusub uu burinayo hadaladii hore ee uu sheegay.
Markii wargeyska New York Times uu markii ugu horeysay tabiyay kulanka, Trump waxa uu sheegay in wiilkiisa iyo garyaqaanka Ruushka ah ay ka wada hadleen arrimo la xiriira barnaamij ay dowladda joojisay oo ku saabsanaa carruur Ruushka u dhashay oo ay korsan jireen dad American ah.
Haddase waxa uu sheegay in kulanka uu ku saabsanaa musharixii la tartamaysay Hillary Clinton.
Waa wax iska caadi ah in siyaasiyiinta Maraykanka ay daraasad ku sameeyaan dadka ay siyaasadda isaga soo horjeedaan.
Balse qubarada sharciga ayaa sheegay in Trump uu ku jiro gef sharciyeed, lagana yaabo in uu ku xad gudbay sharciga mamnuucaya in dowlad shisheeye laga qaato lacag ama wax uun faa’iido u leh ololaha doorashada.
Trump ayaase sheegay in xog wax yeeleyn kartay Clinton aysan uga soo bixin kulanka, waxayna ku adkaysanayaan in kulanka uusan jabinin wax sharci ah.
Ururuka xamaas oo ka jawabtay duqayn Israel la beegsatay Gaza
March, 26, 2019
Dowlada Masar ayaa la sheegay inay waan-waan ka ...
War-Murtiyeed Wadajir ah Beesha Caalamka oo Soomaaliya ku taagertay Dib-u-hayebynta Hay’adaha Ammaanka
Qaramada Mudoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub, Ingiriiska, iyo ...
SAWIRO:- Wasiir Cawad oo ka qeyb galay Shir ka dhacay dalka Morooko
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Mudane Danjire ...
Al-Shabaab oo Goob fagaaro ah ku toogtay 5 Ruux
Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa fagaaro ku yaalla deegaanka ...
Xalinta Xiisad u dhaxeysa Puntland iyo Soomaaliland oo bilaabatay
Magalada Ceerigaabo ee Xarunta gobolka Sanaag waxaa kulan ...
SAWIRO:- Kulan Dhuusamareeb uga socdo Wasiirka Arrimaha Gudaha & Madaxda Galmudug
Wefdi uu hogaaminaayo wasiirka arrimaha gudaha Xukuumadda Federaalka ...
Afar Carruur ah & Hooyadood oo ku geeriyooday waxyaabaha qarxa
Qaraxaan ayaa waxaa uu ka dhacay deegaan lagu ...
Madaxweyne Farmaajo oo qiray in Ciidamada dowladda dhowr bil mushaar qaadan
Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa taagneyd cabasho ka ...
Maamulka Sh/Hoose oo ka hadlay Cabashada Ciidamada dowladda ee Gobolkaas
Laba Maalin ka hor Ciidamo ka tirsan kuwa ...
Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo gaaray Dhuusamareeb
Magalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud ayaa waxaa ...